We Fight We Win. -- " More than Media ": သတိပေးချက်
ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မ အလိုမရှိ။
နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန် လိုအပ်တယ်။
ပုဒ်မ ၄၀၁ တွေ ၊ ၄၀၂ တွေလုပ်မနေနဲ့။
တပြည်လုံး ဆူ ရပါ လိမ့်မယ်။
မျက်စိမလည်ကြနဲ့။
ဆူရင် လဘက်ခြောက် ခတ်လိုက်ပေါ့ကွ...
သိပ်ဆူမနေ နဲ့ ကွ ..လူကြီးတွေ အိပ်နေတယ်။
12 January 2012 at 09:26
ကြောင်တောင်တောင်တွေမပြောနဲ့ တော့ လေ.....
12 January 2012 at 10:54
တပြည်လုံး ဆူနိုင်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပြီလား ။
လက်ရှိပြည်တွင်းက အနေအထားကိုရော သိရဲ့ လား။
ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိတာကို ပြီးစလွယ် လျှောက်ပြောပြီး ၊
တကယ်ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ၊ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား
တွေသိက္ခာကျတယ်လို့မထင်မိဘူးလား။
ကိုမိုးသီးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက လေးစားခဲ့တာပါ။
သိပ်စိတ်ပျက်မိတယ်။ အခုလို ပေါ့ပျက်ပျက်တွေ လုပ်နေတာကို။
12 January 2012 at 12:33
သိပ်မပေါနဲ့ရဲဘော်
လူတွေက သိတယ်။ ဘယ်သူဘာလဲဆိုတာ။
ဖိန့် ဖိန့် နဲ့ လုပ်လို့ ရတဲ့ခေတ်က တဖြည်းဖြည်း ဟိုးဝေးဝေးမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။
12 January 2012 at 16:38
Agreed to all the comment!
You just SHUT UP, wait and see as before..
13 January 2012 at 05:58
13 January 2012 at 05:59